သင့်ချစ်သူမှာ တစ်ဖက်သတ်စိတ်ဝင်စားသူ ရှိနေရင် – Gentleman Magazine
သင့်ချစ်သူမှာ တစ်ဖက်သတ်စိတ်ဝင်စားသူ ရှိနေရင်
22/05/2017 22/05/2017 mmgentlemanmagazine
သင့်ရဲ့ချစ်သူ ဒါမှမဟုတ် ဇနီးက အခြားအမျိုးသားတွေကို တစ်ဖက်သတ်စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင် တုန်လှုပ်စရာကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင်လည်းပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၄)နာရီအတွင်းမှာ အခြားအမျိုးသမီးတွေကို လိုက်ကြည့်ခဲ့ပြီး တစ်ယောက်ယောက်ကို သဘောကျနေခဲ့မှာပါ။
လေ့လာမှုတွေအရ ချစ်သူရှိပြီးသား ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ကျပြီးသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းက အခြားယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ယောက်ကို တဖက်သတ်စိတ်ဝင်စားနေလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ လုံးဝတဖက်သတ်ပါ။ တစ်ယောက်ယောက်အကြောင်းကို စိတ်ကူးယဉ်မယ်။ သူ့နာမည်ကို မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ တနည်းနည်းနဲ့ ရေးမှတ်ထားမယ် စသဖြင့် စွဲလမ်းနေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အခြားလူတွေ လုံးဝမသိစေပဲ တိတ်တခိုးစွဲလမ်းနေတာဖြစ်ပြီး တစ်ကိုယ်ရည်စိတ်ဖြေတဲ့အချိန်မှာတောင် တွေးနေလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုက ဆန်းသစ်တဲ့အတွေးတွေဖြစ်စေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ယုံကြည်လက်ခံထားတာက ယောင်္ကျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး လက်ထပ်လိုက်တာနဲ့ အခြားတစ်ယောက်အကြောင်း တွေးမိတာတွေ ပျောက်သွားမယ်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်များ အခြားတစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားနေတာလဲ??
တဖက်သတ်စိတ်ဝင်စားသူတွေက ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ချစ်သူရှိတာ ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ရုံနဲပ တဖက်သတ်စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ဒါက သဘာဝပါပဲ။ မိန်းကလေးအများစုက သူတို့တဖက်သတ်စိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တောင်မှ ထုတ်ပြောတတ်ကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သူတို့စိတ်ဝင်စားတတ်ကြသူတွေက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ရည်းစားဟောင်းတွေနဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သိပ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဒီလို တစ်ဖက်သတ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက် သင်နဲ့ သင့်တို့နှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးကို မထိခိုက်စေနိုင်ပါဘူး။ အခြားတစ်ယောက်ကို စွဲလမ်းမိတာက အိမ်ထောင်ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ မတွန်းလှန်နိုင်လောက်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို တစ်ဖက်သတ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက် သူမဖောက်ပြန်တော့မယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ မိန်းကလေးအများစုက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကို အပြင်မှာတကယ်ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားလေ့မရှိကြပါဘူး။ အခြားယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ကို တစ်ဖက်သတ်စိတ်ဝင်စားမိကြောင်း ၀န်ခံထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ (၅)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့အဆင့်ထိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
တကယ်တော့ အခြားယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ကို တစ်ဖက်သတ်စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ ချစ်သူနဲ့ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုတိုးတက်စေပါသေးတယ်။ ဒါဟာ တစ်နေ့တာလုံး စိတ်တက်ကြွနေပြီး ခံစားချက်တွေအားလုံးကို အိမ်ပြန်ရောက်မှာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ကုန်ဆုံးရတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုထားပါတယ်။
အခြားတစ်ယောက်အတွက် စိတ်တက်ကြွတယ်ဆိုတာကို မနှစ်သက်ဘူးလား??
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က စိတ်ပျော်ရွှင်သာယာနေလေလေ၊ သူမရဲ့လိင်စိတ်နိုးကြားလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သစ္စာရှိတဲ့ဇနီးတစ်ယောက်ဆိုရင် သင့်အတွက် မကောင်းတာမရှိပါဘူး။ အချို့မိန်းကလေးတွေကတော့ အခြားယောင်္ကျားတစ်ယောက်အကြောင်း တွေးမိတိုင်းမှာ လက်ရှိလက်တွဲဖော်ကို ပိုတန်ဖိုးထားတတ်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလို တစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်စားမှုကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ ??
အခြားတစ်ယောက်ကို တစ်ဖက်သတ်စိတ်ဝင်စားနေတာက သဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ချစ်သူ ဇနီးမယားကို ဆုံးရှုံးမှာစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ခံစားချက်ကို စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီအခြေအနေကို ကိုင်တွယ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကွာခြားကြပါတယ်။ တစ်ချို့စုံတွဲတွေက တစ်ဖက်သတ်စိတ်ဝင်စားသူအကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြပေမယ့် နာကျဉ်စရာတွေ ခံစားကြရတာများပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လိုအပ်သလို စီမံတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
သင်တစ်ဖက်သတ်စိတ်ဝင်စားနေသူအကြောင်းကို သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို ပြောပြခြင်းအားဖြင့် စိုးရိမ်မှုကို သက်သာစေပါတယ်။ ဒီလိုပြောခြင်းအားဖြင့် ရိုးသားပွင့်လင်းရာရောက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချမှုရစေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောရတာအလကားပဲလို့ ထင်ရင်လည်း မပြောပဲနေလို့ရပါတယ်။ လူအများစုက သူတို့လက်တွဲဖော်က အခြားတစ်ယောက်ကို စိတ်ထဲမှာစွဲလမ်းနေတယ်ဆိုတာကို မသိကြတာများပါတယ်။ သူမကလည်း ဒီကိစ္စအတွက် မလိုအပ်ပဲ သင့်ကိုစိတ်ပူနေစေချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဖောက်ပြန်မိဖို့ အကြောင်းရင်းက ဖောက်ပြန်နိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရှောင်ရှားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ သင်စိတ်ဝင်စားနေသူအကြောင်းကို အတွေးထဲကထုတ်လိုက်ပါ။ သူ ဒါမှမဟုတ် သူမနဲ့ နှစ်ယောက်တည်းအတူရှိနေချိန်တွေကို ရှောင်ရှားပါ။
သင်စိတ်ဝင်စားနေသူအကြောင်းကို ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတာက လူအများစုအတွက် အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုတွေးနေမိခြင်းအားဖြင့် တစ်ကိုယ်ရည်စိတ်ဖြေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်တင်းနှောရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေတယ်လို့ အမျိုးသမီးတစ်ချို့က ပြောကြားထားပါတယ်။ ဖောက်ပြန်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ စိတ်ပျော်စရာတစ်ခုအဖြစ် မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချတတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို တစ်ဖက်သတ်စိတ်ဝင်စားမှုကြောင့် ချစ်သူစုံတွဲတွေ၊ ဇနီးမောင်နှံတွေအကြားမှာ ထိခိုက်မှု မရှိသလောက်ကို နည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို အပြစ်ကြီးတစ်ခုလို ယူဆပြီး သစ္စာမဲ့မှုတစ်ခုလို့ ထင်မှတ်နေရင်တော့ စိတ်ပျက်စရာတွေနဲ့ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်။ အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားမိတာဟာ သင်ကိုယ်တိုင်ရော သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်အတွက်ပါ သမားရိုးကျသဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဆိုတာကို သတိပြုပါ။ သူမကို ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို မမေ့ပဲ အရင်အတိုင်းပဲ ယုံကြည်မှုရှိနေပေးလိုက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Previous: မနက်ဖြန်အထိ စောင့်မနေပါနဲ့
Next: စစ်မှန်သော Network စီးပွါးရေး